kml ilaa dxf - Shan siyaabood oo looga dhigo is-beddelka - Geofumadas
Janaayo, 2009 Google Earth / Maps, GvSIG
Muddo ka hor waxaa jiray codsi wax ku ool ah saaxiibkii Zonums Taasi waxay qabatay shaqadan iyada oo aan wax dhib ah lahayn (kml ilaa dxf). Nasiib darro, saaxiibku wuxuu ahaa mid aad u xeeladaysan markii uu abuurayo taariikhda dhicitaanka, sida marka uu furo hadda wuxuu sheegaa in uu durba dhacay; Waxay u badan tahay in uu iibin doono liisanka ... blah, blah, blah.
Waa hagaag, waxa aan rabno waa inaan bedelno faylka kml ee qaabka dxf in loo isticmaalo tifaftiraha CAD sida AutoCAD ama Microstation.
Tilmaame hore: Ha ahaato mid aan loo baahnayn.
Hubi in barnaamijka aad isticmaasho uusan ahayn, sidaa daraadeed uma baahnid inaad dalbato dalab dheeraad ah.
Kiiska, kala cayncayn ah, wac kaliya kml, u qoondee qorshaha aan rabno inaan dhoofino oo aan u dirno dxf. Sidaa daraadeed $ 245.
Sidoo kale, doorasho kale oo dhaqaale waa Khariidadda Caalamiga ah, taas oo u dhiganta $ 299.
Haddii barnaamijyadan waxaa qiimahoodu ka yar yahay $ 300 si fudud u samayn, waxay u badan tahay in software GIS ganacsiga ayaa sidoo kale aad isticmaasho, sidaa darteed marka hore isku day waxa aad hore u leedahay.
Caarada labaad: Samee fudud oo aan burcad-badeed ahayn.
Xaaladdan, waxaanu ku sameyn doonaa gvSIG, isaga oo ka faa'iideysanaya inuu yahay rukhsad bilaash ah iyo qof kasta oo isticmaala ArcView 3x waa inuu bartaa isticmaalka asaasiga ah dhowr saacadood oo ah xushmadda is-dhiibta.
Calaamada saddexaad: Jooji akhri, adoo kaliya sameeya.
kml ilaa dxf shan tallaabo
1 GvSIG furo
Waa inay noqotaa gvSIG 1.9 alpha ama ka sarreeya dhismaha 18, sababtoo ah version hore ee deggan 1.3 ma furin faylasha kml. gvSIG waxay noqon kartaa download boggaaga, iyo halkan way isbarbar dhigeen qaar ka mid ah faa'iidooyinka noocan ah ee aan rajeyneyno inaan si dhakhso ah ugu qalinjabin doono gvSIG 2.0
2. Abuur abuur
Marka aad gvSIG gasho, doorka "aragtida" ayaa lagu doortaa maareeyaha mashruuca iyo badhanka si loo abuuro aragti cusub ayaa la cadaadiyaa.
Waad magacaabi kartaa, taabashada iyo badhanka "rename", kiiskayga ayaan ugu yeeray "Cadastre". Qalabka guryaha la rabo in la fiiriyo (ma aha qaababka shakhsiga)
3. Furan aragtida
Si aad u furto aragtida, laba jeer waxaad riixdaa, ama taabataa oo riix batoonka "furan" ee guddiga saxda ah. Tani waa inay furto lakabka kml, sida ku cad sifooyinka ay leedahay, waxaad u furi kartaa aragtiyo badan iyo layers sida aad jeceshahay, iyo sidoo kale layers ArcView.
4. Furo kml
Marka aragtida la furo, kml waxaa lagu buuxiyaa badhanka si loo daro lakabyada. Nooca darawalka ee kml waa la doortaa, faylka ayaa la raadiyaa (waxay noqon kartaa kml ama kmz).
Haddii ay joogsadeen, waxaa suurtagal ah in la waco dgn, dwg, dxf, shp iyo kuwo kale. Qeybta hoose, qiyaasta ayaa loo qoondeeyey.
5. Ku dhoofi dxf
Si aad u dhoofiso, taabo lakabka, kadibna dooro ikhtiyaarka "lakabka / dhoofinta" kadibna dooro dxf.
Waxaa xiiso leh in gvSIG ay sidoo kale ka dhigto is-beddelka kml ilaa shp iyo waliba.
Calaamada afaraad: Ha necbayn software-kaaga.
Si deggan, hababkaas maalin kasta waxay u badan tahay inay ku qasbaan barnaamijyadeena GIS ee waaweyn si ay u hirgeliyaan shaqadooda dhaqsaha badan.
Siyaabo kale oo 4 ah oo lagu badalayo fiidyadii kml ee dxf (kml ilaa dxf):
Post Previous«Previous Horumarinta dadaallada: DielmoOpenLiDAR
Post Next Khariidadda saliiddaNext »
4 Jawaab in "kml to dxf - Shan siyaabood oo loo sameeyo isbedelkaas"
Paulo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystay qaar faylasha SHP ah ugu dambeynti waan u rogi karaa DXF mahadsanid barnaamijkan. Wali ma aanan arkin fursadaha intaa ka badan ee aad haysatid, sida ugu dhakhsaha badan ee aad waqti u hesho waxaan inbadan baari doonaa. Hada, super !!!
Hubi inaad isticmaasho qayb aan ahayn ugu dambeyn.
Maqaalkani wuxuu ka bilaabmaa Jannaayo 2009, laakiin ilaa hadda iminka waxaa jira qaabab cusub oo ah gvSIG oo horayba u xalinayey dhibaatada.
hello sidee ayaad tahay?
Wax dhibaato la mid ah Mario ii la muuqataa qalad siguienet "ma qabsadeen by user" iyo lakabka calaamad cas oo iskutallaabta, barnaamijka la soo bixi link waa wax yar oo kala duwan waxa aan rumaysan waxaa soo bandhigay by a update,
Ma jiraa hab kale? Qaar ka mid ah barnaamijyada kale ??
mahadsanid iyo bogga aadka u fiican
Halkaan u soco
Waxaan isku dayay inaan furo kml ama kmz guul la'aan. Markii aan isku dayo waxaan helaa farriinta khaladaadka soo socota: "Khalad uusan isticmaalin isticmaaley" iyo faahfaahinta faahfaahin badan oo aan suurtagal ahayn in la qoro.
Maxaan samayn karaa qalad?
Waad ku mahadsantahay horeyna waan sugayaa jawaabtaada.
Salaan iyo sii wad sidan.